Awumhleki, ngoku uza kwenza ntoni? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2009 NgeCawa, Agasti 19, 2012 UChris Lucas
Sakha sanomntu osixelelayo ukuba thina, okanye mandithi wethu isicelo sokwakha ifom, yayingenguye “sexy”. Ngandlela thile ndicinga ukuba lo mntu unyanisile. Iifom, ngokwazo azithandeki, kodwa kubantu abazisebenzisayo kwaye baxhomekeke kuzo ukuqokelela idatha, zibalulekile, ukuba azithandeki, zibalulekile.
Ke wena, ungumnini weshishini, umthengisi, njl., Onemveliso okanye inkonzo engekho "kumnandi" uyenza ibe "sexy"? Nazi iindlela ezimbalwa.
Xelela iBali loMthengi wakho: Amathuba kukuba unezinye iinkampani ezinomdla ezisebenzisa inkonzo yakho okanye imveliso. Yenza izifundo zetyala. Vumela abathengi bathumele iposti kwibhlog yakho, benze udliwanondlebe kunye nabo ze ubathumele kwinethiwekhi yakho. Fikelela kwiibhlog kwindawo yakho ngebali labo, impumelelo yabo. Ngokujolisa ekusetyenzisweni okupholileyo kunye nokuyila kwemveliso yakho uyenza ibangele umdla ngakumbi kwaye ivulele iindlela ezintsha zokuthetha nokubhala ngawe.
Vula iHood: Ngaba unetekhnoloji enomdla ngokwenene eqhuba ishishini lakho? Ngaba uyile inkqubo ekhethekileyo yokunceda ukuqhuba ishishini lakho? Amathuba kukuba ishishini lakho linento eyodwa eyayiqhubayo (okanye ngekhe uphumelele). Gqamisa izinto ezizodwa zeshishini lakho kwaye unike abantu umbono emva kwekhethini. Eyona nto inokuba yinto enokuba ngabathengi okanye amalungu eendaba anokuyifumana inomdla.
Vumela abaThengi bakho baYenze iBhidi yakho: Oku kwahluke kancinane kuneyokuqala. Ubuhle beenethiwekhi zentlalo kukuba buvumela abathengi bakho ukuba bathethe ngawe. KwiIFomstack sibeka esweni oko kuthethwa ngabantu ngathi Twitter. Endaweni yokugcina nje zonke izinto ezintle kuthi sazenzela Ishumi loDumo Siziprintile saza saziyila ezo tweets zilungileyo saza sazibeka kwipaseji yeofisi yethu. Siphinde sabathumela kwakhona kwaye sathumela ezinye zeetweets eludongeni kwiphepha lethu le-Facebook nakwibhlog yethu. Oku kwenza ukuba abantu bathethe ngathi kwakhona kwaye bahenda abanye babantu ababhale amagqabantshintshi okuqala ukuba baphinde bathumele ii-tweets zethu. Idala ukonwaba malunga negama lakho kunye nemveliso yakho kuba ivela kubasebenzisi bokwenyani benkonzo yakho. Yenza abathengi bakho bathethe ngawe, baxelele abahlobo babo ukuba "u-sexy" njani kwaye kutheni bekuthanda.
Ngenxa yokuba ungenayo igajethi eqaqambileyo okanye isicelo esithandwayo senethiwekhi kwi-intanethi oko akuthethi ukuba ishishini lakho alonwabisi. Gumba kancinci kunomphezulu kwaye ubone ukuba yintoni eya kwenza abantu bathethe. Amathuba awuzukufuneka umbe nzulu kakhulu.
tags: ibali lomthengiindlela yobumeukubalisa ibali
Novemba 20, 2009 ngo-6: 49 PM
Ndicinga ukuba 'Ayimfanisi' ngandlela ithile ibheji yokuhlonipha apha eIndiana. Uninzi lweenkampani ezilapha zenza izicelo ezingezizo ezesini kakhulu… kodwa ziyasebenza. Bakhuselekile, bayalinganisa, benza le nto abathengi bafuna ukuba bayenze. I-Sexy ilungile xa ujonge umhla, kodwa leli lishishini!
Novemba 20, 2009 ngo-6: 23 PM
Unokuphakamisa ukonwaba komntu obona ngokwenyani "isini" sento oyenzayo. Oko kunokuba ngumthengi, umqeshwa, iqabane lomzi mveliso, okanye omnye umntu ngokupheleleyo.
Ndandinomfundisi-ntsapho wecalculus owayexolelwe ngokumangalisayo malunga nendlela esebenza ngayo imathematics. Wayeza kubeka ii-equations kunye nemizobo kwibhodi kwaye enze ulwelo luvuyo ngendlela entle ngayo yonke into. Wayenoncumo lomntwana ngentsasa yeKrisimesi. Ukuba ubusegumbini kunye naye ngekhe uncede kodwa ubone obunye ubuhle kubudlelwane phakathi kwamanani. Inzondelelo yakhe yayosulela. Wenza i-calculus enomdla.
Novemba 20, 2009 ngo-6: 51 PM
Clay indawo elungileyo kwaye ndiyavuma. Imincili, uthando, umntu analo ngemveliso okanye inkampani ngokuqinisekileyo inokuxhamla. Nangona kunjalo, andiqinisekanga ukuba ndingaze ndibubone ubundlobongela kwi-calculus!